Mashiinka Goynta Laser-ka, Makiinada Sawirka Laser - Goldenlaser
Islaaydh soo socda??
Faahfaahinta slide-ka hore.
Faahfaahinta bogga labaad.
Faahfaahinta bogga saddexaad.
Ku Soo Dhawoow GOLDENLASER
Goldenlaser wuxuu diiradda saarayaa bixinta garaadka, dhijitaalka ah, iyo xalalka laser iswada.
Soo saaraha nidaamyada laysarka ee goynta, xaradhka iyo calaamadaynta.takhasuska ku lehCO2 mashiinka goynta laser,Galvo laser mashiinkaiyomashiinka dhinta laser dhijitaalka ah.
Laga soo bilaabo la-talinta ugu horreysa ilaa tijaabooyinka arjiga oo leh agabkaaga loogu talagalay warshado gaar ah ilaa tababar loogu talagalay isticmaaleyaasha iyo adeegga adduunka oo dhan - Goldenlaser wuxuu bixiyaa xalal laser dhammaystiran, ma aha oo keliya hal mashiin!
MAKIINADA LAGU SOO TALIYEY
CO2 LAASER CUTTER
CO2 GALVO LAASER
LAASER DIE CUTTERS
Nidaamkan laser wuxuu isku daraa galvanometer iyo XY gantry.Galvo waxay bixisaa xardho xawaare sare leh, xoqin, daloolayn iyo goyn qalab khafiif ah.XY Gantry waxa uu ogolaadaa habaynta astaan ??weyn iyo kayd dhumuc weyn leh.
Qaabka No.: ZJ(3D)-9045TB
Xawaaraha Sare ee Galvo Laser-ka Sawirka ee Kabaha Hargaha
CO2 RF bir leysarka 150W 300W 600W.Nidaamka xakamaynta galvanometer firfircoon 3D.Si toos ah kor iyo hoos dhidibka Z.Shixnadaha tooska ah ee zinc-iron alloy-ka miiska shaqada
Qaabka No.: ZJ (3D)-15050LD
Galvo Laser Perforating Mashiinka Goynta Sanduuqa Abrasive saxannada
Nidaamyada iskaanka galvanometer-aagga-weyn.Ilaha laser-ka badan si loo kordhiyo wax soo saarka.Quudinta tooska ah iyo dib u rogida - qaadiyaha…
Waxaan ku takhasusay goynta laysarka iyo xalalka xardhafinta ee codsiyada kala duwan.Waa kuwan qaar ka mid ah codsiyada aan inta badan ku shaqayno.
Dooro warshadahaaga: xalalka laser ugu habboon adiga kugu habboon.
HAWADA KALA DUWAN
HARGGA & KABAHA
Iyada oo hal-abuurnimo tignoolajiyadeed xooggan, Golden Laser wuxuu awood u leeyahay inuu bixiyo mashiinnada laysarka iyo xalalka, ka dhig wax-soo-saarkaaga mid hufan oo faa'iido leh.
Waa maxay sababta Laser
Sida hal-abuurnimo tignoolajiyadeed ee waagii-samaynta, laysarka waxa uu ku horumarayaa faa’iidooyin aan la qiyaasi karin, isaga oo beddelaya hannaan-dhaqameedyo badan oo badan.
Darawalka Nidaamyada Laser-ka
Buug-yaraha Nidaamyada Laser-ka
Buugga Isticmaalaha Nidaamyada Laser-ka
Ku saabsan Laser Golden (faylka PDF)
Had iyo jeer bixi taageerada adeegga.Injineerada diyaar u ah mishiinada adeega dibada ee adeega rakibaadda, adeega tababarka iyo adeega dayactirka.
Ka fiirso halkan si aad u hesho macluumaadka ku saabsan warshadaha khuseeya iyo wararkayagii iyo dhacdooyinkeenii u dambeeyay.
Goynta Laser fiber carbon waxaa lagu samayn karaa CO2 laser, kaas oo isticmaala tamarta ugu yar laakiin bixiya natiijooyin tayo sare leh.Tiknoolajiyada wax-soo-saarka laser-ka-goynta fiber-ka carbon waxay sidoo kale ka caawisaa dhimista heerarka qashinka marka la barbar dhigo farsamooyinka kale ee wax soo saarka…
Marka ay timaado abuurista maaskaro sublimation caado ah, gooyaha laser wuxuu noqon karaa qayb muhiim ah oo ka mid ah samaynta qaybahan quruxda badan.Waa kuwan fikrado ku saabsan sida aad u isticmaali karto tignoolajiyadan cusub…
Wax-soo-saar sax ah ? Dabagal heer sare ah
Bixiyaha Hoggaaminaya Xalalka Laser
Waayo-aragnimada 20 sano ee warshadaha laysarka, si joogto ah u kobcaya oo isticmaalaya tignoolajiyada horumarsan, Goldenlaser wuxuu noqday saaraha hormuudka ah ee mashiinnada laysarka oo leh karti wax-ka-beddelid casri ah.
> Baadh mishiinnada laysarka
Goldenlaser wuxuu ku siinayaa xalal laser xirfadeed oo loogu talagalay warshadaha codsigaaga gaarka ah - si ay kaaga caawiyaan inaad kordhiso wax soo saarka, fududayso habka habraaca iyo inaad samayso faa'iido badan.
Suuqa dibadda, Goldenlaser waxa ay aasaastay shabakad suuq-geyneed qaan-gaar ah in ka badan 100 waddan iyo gobollada adduunka oo dhan, oo leh badeecadeena tartan iyo nidaamka hal-abuurka suuqa ku wajahan.
> Wax badan ka baro Goldenlaser
Xuquuqda daabacaadda ? 20052021 Wuhan Golden Laser Co. Ltd. Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.